शनिबार साहित्य – MySansar
Category: शनिबार साहित्य
Posted on October 23, 2021 by Salokya
कथा : ऐंठन
Posted on June 5, 2021 by mysansar
– अनन्त लम्साल – पुसको एक निर्मम बिहान, प्रस्टै उज्यालो भइसकेको थिएन । सडक वरिपरिका मान्छेहरू देख्दा, म जस्तै सबै गरिबीको रापले भुट्भुटिएर झिसमिसेमैं शितलताका खातिर निस्किएका हुन् कि भन्ने पनि लाग्यो । कसैलाई वाहनले तानिरहेको थियो भने कोही आफ्नै दुई पयरका सहायतामा घस्रिरहेका थिए । कोही फोहोरको थुप्रोमा आगो लगाउने प्रयत्न गर्दै धुवाँको मुस्लोमा… Continue reading
कथा : बाँध
Posted on July 11, 2020 July 11, 2020 by mysansar
कथा : मोबाइल र श्रीमती
Posted on June 27, 2020 by mysansar
– प्रकाश अविनाश – करिब तीन चार महिनादेखि उनको व्यवहार अनौठो देखिन थालेको थियो । खास गरी मोबाइल फोनको सन्दर्भमा । यसअघि उनको मोबाइल कहाँ रहेको हुन्थ्यो उनैलाई थाहा हुने थिएन, धेरै जसो मेरो मोबाइलबाट कल गरेर पत्ता लगाउनु पर्थ्यो । जहाँ जति बेला जसले पनि खोलेर हेर्न, गेम खेल्न, कल गर्न सक्थ्यो , किनकि… Continue reading
-हरि घिमिरे, भर्जिनिया- सागर त्यसबेला सुखी परिवारको अभिभावक। छोरा र छोरी विज्ञान विषय लिएर आइ.एस्सी. उत्तीर्ण गरेका। श्रीमती कलेजमा पढाउने। आफू पनि सरकारी कलेजको कमर्शको प्राध्यापक,बोर्डिङ् स्कूलको संस्थापक, निजी कलेजको प्रिन्सिपल। कुनै कमी थिएन जीवन सञ्चालन गर्ने पद्धतिमा। सागरलाई अमेरिका जाने धून चढ्यो। उसले कयौं प्रयास गर्‍यो। तर सफल हुन सकेको थिएन। आफ्ना सम्पूर्ण नजिकका… Continue reading
लघुकथा : ग्लानी
Posted on March 9, 2019 by mysansar
– ऋचा लुइँटेल – हामी बसेको घर नजिकै जमिन्दार छिमेकी थिए। उनीहरुका सामु हाम्रो हैसियत भनेको दिनदुःखी, बिचरा। जमिन्दारको जेठो छोरो इन्जिनियर अस्ट्रेलिया। दुई छोरी अमेरिका। कान्छो छोरो जापान। बूढाबूढी सधैं सुकिला। जमिन्दार बज्यैले लगाउने जस्तो सारी आमालाई किनिदिन खोजेको, के सकिन्थ्यो। हामीले वर्ष दिन जहानैलाई लुगा किन्न पुग्ने पैसाभन्दा महँगो सारी लाउँथिन बज्यै। कानमा… Continue reading
सपनामा निर्मला : पापमोचन
Posted on January 19, 2019 January 19, 2019 by mysansar
-राजु अधिकारी – एक जना व्यापारीको घरमा अतिथि बनेर टन्न मार्सीको भात खाएर आएर मस्त सुतेका उनलाई राति सपनामा निर्मला पन्तले तर्साइन। च्यातिएका लुगा, रक्ताम्य शरीर अनि लथालिङ्ग कपालकी निर्मलाले सपनामा उनलाई भन्दै थिइन- ‘मलाइ न्याय चाहियो। मलाइ थाहा छ, तिमीले नै मेरो बलात्कारी र हत्यारालाई लुकाएर राखेका छौ। यदि तिमीले मलाइ न्याय दिएनौ भने… Continue reading
कथा : सपनीमा दसैँ
– झलक पौडेल – ” आफ्नै गाउँ फर्की आए ” भन्ने एउटा पुरानो नेपाली फिल्मको धुनले म बियुझीए । मेरो पाँच बर्से छोरोले खासै नेपाली बोल्न नजाने नि , हामी दशैको लागि नेपाल जाँदै छौ भने पछि उसले मम्मीलाई भनेर आलरमको घण्टी चेन्ज गरेको रहेछ । मेरो छोरो यही जर्मनीमा नै जन्मेको । उ अझ… Continue reading
-शुषमा मानन्धर- “मेरो बलात्कार भएको छ ।” कुरा सुनेर पहिले त ऊ निकै झस्की । नपत्याएझैँ मेरो अनुहार हेरी। “चाहिने कुरा पो गर्नु अजीत।” उसले आँखा र निधार खुम्च्याउँदै निहुरिएर भनी, “कहीँ लोग्नेमान्छेको पनि बलात्कार हुन्छ, अझ उसमाथि तिमीजस्तो स्मार्टको?” “तिमीसँग कहिल्यै झूठ बोलेको छु र? त्यही बताउन त आज यहाँ बोलाएको हुँ। के ममाथि… Continue reading
-राजु अधिकारी – आज उसको मर्ने दिन। उसलाई सबै थाहा छ, उसले सबै कुरा बुझ्छ तर ऊ बोल्न र आफ्ना भावनाहरू अन्य माध्यमबाट व्यक्त गर्न असमर्थ छ। पशु हुनुको सजाय त्यही हो। जतिसुकै पिडा भए पनि जतिसुकै छटपटी भए पनि उसको त्यो पिडा र छटपटी कसैले बुझ्न सक्दैन या बुझ्न चाहँदैन। पाँच दिन अगाडी मात्रै… Continue reading
कथा : माछो माछो- भ्यागुतो
Posted on October 6, 2018 October 7, 2018 by mysansar
-राजु अधिकारी- एक दिन हापुर खोलामा माछा मार्न जाँदा माझी माइलोले खोलाको रहमा बडेमानको माछो देख्यो। हापुर खोलो त्यति ठुलो थिएन त्यसैले त्यहाँ त्यति ठुला माछा पाइन्नथे। चरिंगा, सेताला र सैयाँ नै त्यहाँका मुख्य माछा थिए अनि कहिलेकाही बाम माछाले पनि दर्शन दिन्थे। त्यसैले उसले त्यो रहमा त्यति ठुलो माछो पहिले कहिले देखेको थिएन। त्यति… Continue reading
-राजु अधिकारी- ‘मामु पतिव्रता भनेको के हो?’ दुई कक्षामा पढ्ने छोरीले एक दिन स्कुलबाट आउँदा आउँदै सोधेको प्रश्न सुन्दा उसलाई अचम्म लाग्यो। यति सानै उमेरमा उसले त्यति गम्भीर प्रश्न सोधेकी थिई। ‘कसले सोध्यो?’ उसले छोरीलाई काखा हाल्दै सोधी। ‘जसले सोधे पनि भन्स्यो न, पतिव्रता भनेको के हो?’ छोरीले जिद्दी गरी। आजभोलि जताततै तिजको चहल पहल… Continue reading
Posted on September 1, 2018 by mysansar
-राजु अधिकारी – सानो छँदा उसलाई ठुलो मान्छे बन्ने रहर थियो। त्यसमा खास गरी दुईवटा कुराले भूमिका खेलेको थियो। पहिलो कुरो त ठुलो मान्छेहरूले गर्ने कतिपय कृयाकलापहरुमा उसलाई रोकावट थियो जुन उसले गर्न चाहन्थ्यो। केही रमाइलो चिज गर्न खोज्यो ‘यो ठुलो मान्छेले गर्ने काम हो, तँ अझै सानै छस् ठुलो भए पछि गर्लास्’ भनेर आमा… Continue reading
-डा. सुमन राज ताम्राकार- म अहिले ब्रहृमनालमा लम्पसार छु । मलाई कात्रो र रामराम लेखेको पिताम्बरले छोपिएको छ । म मरेको धेरै बेर भा’छैन किनकि म अझै तात्तातै छु । म मरेको खबरले मलाई अन्तिम पटक दर्शन गर्न एकपछि अर्को गर्दै ओइरिरहेका छन् । पालैपालो पानी ख्वाउने क्रम जारी छ, अर्थात् हुँदैछ । हाम्रो त्यस्तो… Continue reading
-राजु अधिकारी- भगवान् शिवको पार्वतीसँग बिहे नहुँदै उनका परिवार भने पनि साथीहरू भने पनि नन्दी, भ्रिंगी, भूतप्रेत र गणहरू नै थिए। त्यति बेला उनीहरूलाई महादेवले स्वतन्त्र छोडिदिएका थिए। उनीहरूले आफूले गर्न चाहेको कुरा गर्थे, खान चाहेको कुरा खान्थे, डुल्न चाहेको ठाउँमा डुल्थे। महादेवलाई ध्यानमा बस्दैमा फुर्सदै हुँदैनथ्यो, उनीहरूको वास्ता गर्ने समय कहाँ हुनु? केही काम… Continue reading
-राजु अधिकारी – आफूले एकीकरण गर्न सुरु गरेको देशको हालत देखेर राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहलाई निकै चिन्ता लागेछ।कत्रा कत्रा सपना बोकेर देश निर्माणमा खटेका थिए उनी र उनका सहयोगीहरू तर आज देश केटाकेटीले घरकुली खेलेको पाराले चलेको देख्दा उनलाई रुन मन लागेछ। तर रोएर समस्या त समाधान हुँदैन, केही त गर्नु प-यो भनेर उनले कालु… Continue reading
कथा : श्री ३ गिद्ध
Posted on August 4, 2018 by mysansar
– जगदीश घिमिरे – एकदम मध्यान्ह्र पनि कैलेकाहीं गोधुलीजस्तै धमिलो देखिन्छ । चालीस डिग्री सेन्टीग्रेडभन्दा तातो त्यो जेठ हुनु पर्दछ र हुनु पर्दछ आँखाको विस्तारभरि छरिएको बलौटे भूमिको सतहबाट समय समयमा लुको झोक्काले धूलाको ज्वार चुल्याउँदै बगाउँदै गरेको । यौटा मरेको भैंसालाई बल्लतल्ल लढियामा लादेर घरतिर फर्किरहेको लढीवान, यस्तोमा, एकदम मध्यान्हमा पनि, सारा आकाश गोधूलीजस्तै… Continue reading
– केडी रेम्नीसीङ – ‘वाउ, क्या मज्जा आयो ।’ सिमरनले मसरुम पिज्जाको स्वाद लिदैँ भनिन् । हुन पनि गाउँबाट धरान झरेदेखि यस्तो मोज गरेर खान बस्न पाको होइन । पहाडकी सङ्गीता आज धरानमा सिमरन भएकी छिन् । अनि बिस्तारै गाउँ तिरकै इन्द्रसँग परिचय भयो । आज उसैको स्पोन्सरसिपमा खान आकी छिन् मसरुम पिज्जा । आफ्नै… Continue reading